Aan horay loo arag waa eray inta badan loo adeegsado in lagu qeexo 2020. Sannadku wuxuu soo bandhigay caqabado aan la qiyaasi karin, oo umuuqda inay hal mar wada socdaan. Waxay cadaadisay samafalka si looga jawaabo deg deg, hal-abuurnimo, iyo ficil wadajir ah. Gugii la soo dhaafay, sida aasaasayaashu u fuliyeen maalgelinta jawaabta degdegga ah, ballaadhinta deeqaha, iyo fududeeynta ama baabi'inta xaddidaadda deeqaha ee jawaabta bilowga ah ee Covid-19, waxaan sidoo kale diyaarinnay istiraatiijiyado soo kabasho oo muddada-dheer ah. Mid ka mid ah tallaabadaas, Golaha Minnesota ee aasaaska (MCF) ayaa aasaasay Barnaamijka Soo-kabashada ee Isku-dhafan iyadoo lala kaashanayo maalgeliyeyaasha maxalliga ah, oo ay ku jiraan McKnight.
Hindisaha ayaa cadeeyay maalgashiyada la xiriira barnaamijka (PRIs) iyo deeqaha lagu taageerayo Hay'adaha Maaliyadeed ee Horumarinta Bulshada Minnesota (CDFIs). CDFI-yada ayaa muhiim u ah u adeegida bulshooyinka aan la maal-gelin duruufaha caadiga ah iyo xitaa ka sii daran dhibaatooyinka. CDFIs waxay soo jiidan karaan, ka faa'iideysan karaan, isla markaana geyn karaan raasumaal aad uga fog ilaha deeqaha samafalka iyada oo loo marayo maalgashiyada bulshada iyo raasumaalka sicirka suuqa. Muhiimad ahaan, waxay samayn karaan lacag si toos ah ay ugu heli karaan bulshooyinka ugu daran. Ilaa hadda, Barnaamijka Soo-kabashada Isku-dhafan ee Isku-dhafan wuxuu aqoonsaday $62 milyan oo ah PRIs iyo $12 milyan oo deeq ah oo laga helay 22 CDFI-yada oo ku baahsan gobolka Minnesota.
CDFIyadu waxay isku toosinayaan oo ay ku uruurinayaan ilahaas xagga mudnaanta muhiimka ah ee cusub ee McKnight Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah barnaamijka. Ahmiyadahan waxaa ka mid ah dib u dhiska jidadka iyo xaafadaha burbursan, ballaarinta fursadaha lahaanshaha maxalliga ah iyo wadajirka ah, iyo taageeridda ganacsiyada yaryar ama kuwa aan macaash doonka ahayn oo ay leeyihiin ama hoggaaminayaan bulshooyinka midabka, haweenka, ama dadka asaliga ah.
Qaab isku duuban oo loogu talagalay Xallinta Dhibaatooyinka
Lacagta Bulshada RSF ee San Francisco, oo maalgelisa ganacsatada bulshada, ayaa abuuray ereyga raasumaal isku dhafan. Waxay loola jeedaa guud ahaan, adeegsiga iskudhafka ah ee habab badan oo sama fal ah si loo xaliyo dhibaatooyinka bulshada iyo deegaanka. Tan waxaa ka mid ah raasumaalka maaliyadeed iyo ilaha aan dhaqaalaha ahayn sida isku xirka, taageerada la-talinta, iyo wadaagga aqoonta.
Barnaamijka Isku-soo-celinta Hantidhawrka Isku-dhafan ayaa tusaale u ah raasamaal isku dhafan oo ficil ah. Aasaaska kaqeyb qaadashada maahan oo kaliya maalgalinta laakiin sidoo kale isweydaarsiga macluumaadka, aqoonsiga maalgashiga, horumarinta falanqaynta la wadaago iyo dadaalka saxda ah, heshiisyada qaabdhismeedka, iyo fulinta maalgashiyada taas oo noqon laheyd mid aad u dhib badan ama caqabad ku ah iyaga inay kaligood raacaan.
Maalgashiga Saameynta iyo Khadka hoose ee Saddex-geesoodka ah
Barnaamijka Isku-dhafan ee Soo-kabashada Isku-dhafan wuxuu soo bandhigayaa sida aasaaska u dhexgeli karo yoolalka barnaamijka iyo maal-gashiga hay'adaha - fikradda ah Saamaynta maalgashiga, taas oo guursata isbedelka bulshada iyadoo laga helayo dhaqaale. McKnight wuxuu bilaabay barnaamijkiisa maalgashiga saamayntiisa isagoo ka jawaabaya 2008 Dhibaatada Weyn, xilli kale oo keli ah oo khalkhal dhaqaale oo ku baaqay istiraatiijiyado cusub iyo ficil geesinimo leh.
Waqtigaas, saamaynta maalgashiga waxaa loo tixgeliyey inay u hurtay raasumaal dhaqaale wanaag bulshada. McKnight wuxuu adeegsaday istiraatiijiyadda si loo wanaajiyo ilaha aasaasiga ah si loo dhiso loona xoojiyo jawaabaha bulshada ee dhibaatada la wareegidda iyo hoos u dhaca dhaqaalaha. Marka sidaas la samaynayo, aasaaska ayaa ugu dambeyntii la kulmay saddexda hoose ee hoose: soo celinta dhaqaalaha, soo celinta barnaamijka, iyo soo noqoshada waxbarashada.
"Maanta qiyaastii boqolkiiba 45 deeqdeenu waa howl isku midaysan, gaaritaanka himilooyinkeena barnaamij iyo inaan qiimeyno iyo kheyraadkeena inaan ka shaqeyno adduunka."
Tan iyo markaas, maalgashiga saameynta ayaa noqday aalad awood leh oo lagu kordhinayo deeqda McKnight. Maanta qiyaastii boqolkiiba 45 ee hibeynteenu waa howl isku mid ah, gaaritaanka himilooyinka barnaamijkeenna iyo inaan u dhigno qiyamkeena iyo kheyraadkeenna inay ka shaqeeyaan adduunka. Waxaan raadineynaa maalgashiyo abuura guryo la awoodi karo, gacan ka geysanaya dhisitaanka joogtaynta gobolkeenna metro, taageeridda ganacsiyada yaryar ee ay leeyihiin dadka midabka leh, kordhinta waxtarka tamarta, dhiirrigelinta jiilka la qaybiyay ee korontada, ama yareynta wax soo saarka kiimikada ee beeraha ganacsiga.
Ku soo biir Barnaamijka Soo-kabashada Hantidhawrka Isku-dhafan
Maalgeliyeyaasha xiiseynaya ka mid noqoshada Barnaamijka Soo-celinta Maaliyadeed ee Isku-dhafan waa inay la xiriiraan MCF. Ururku wuxuu bixin doonaa waxbarasho ku saabsan raasamaalka isku dhafan iyo sida barnaamijku uga caawin karo maalgeliyeyaasha inay sameeyaan PRIs iyo deeqo si ay u taageeraan soo kabashada dhibaatada muddada-dheer. Xubnaha MCF sidoo kale way awoodaan arag webinars si aad waxbadan uga barato.
Macluumaad dheeri ah ama ka mid noqoshada barnaamijka, la xiriir Susan Hammel, Fuliyaha MCF ee degenaanshaha.